Juventus oo Guul Dirqi ah Gaartay, PSG oo Hogaanka si Dheereesatay Natiijooyinka Horyaalada Caalamka | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Juventus oo Guul Dirqi ah Gaartay, PSG oo Hogaanka si Dheereesatay Natiijooyinka...
Juventus oo Guul Dirqi ah Gaartay, PSG oo Hogaanka si Dheereesatay Natiijooyinka Horyaalada Caalamka
Kulamo ka Tirsan Horyaalada Caalamka ayaa Xalay La Ciyaaray iyadoo Kooxaha qaarkood ay Gaareen Guulo Muhiim ah.
Kooxda Juventus ayaa guul soo daahday ka gaartay kooxda Fiorentina oo ay ku martigeliyeen garoonkooda Allianz Stadium kulan ka tirsanaa wareega 12aad ee horyaalka Serie A.
Waqtigii dhimashada ciyaarta ayay Juventus heshay goolka guusha oo uu u saxiixay xiddiga reer Colombia Juan Cuadrado.
Kooxdaq Viola ayaa ku ciyaareysay 10 ciyaaryahan 15kii daqiiqo ee ugu danbeysay ciyaarta markii uu kaar jaale labaad ka qaatay Milenkovic.
Guusha Juventus ayaa ka dhigeysa inay ku jiraan kaalinta 8aad iyagoo leh 18 dhibcood, waxay 13 dhibcood ka danbeeyaan kooxda hogaanka heysa ee Napoli kuwaasoo berri ciyaaraya.
Kulamadii kale ee horyaalka Serie A ee maanta la dheelay kooxda Atalanta ayaa soo gashay kaalinta afaraad ka dib markii ay 2-1 kaga badiyeen Cagliari, waxay seddex dhibcood ka sareeyaan kooxda kaalinta shanaad ee Roma oo kulan uu u harsan yahay.
Kooxda Spezia ayaa iyadana 1-0 ku dubatay kooxda Torino oo marti u aheyd.
Horyaalka Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa 10 dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka markii ay guul ciriiri ah ka gaareen kooxda Bordeaux oo ay uga badiyeen 3-2 iyadoo PSG ay ku sigatay in laga barbareeyo seddex gool oo ay ku hormareen.
Xiddiga reer Brazil Neymar ayaa dhaliyay labo ka mid ah goolasha PSG iyadoo labada goolba uu caawiye ka ahaa Kylian Mbappe, xiddiga Faransiiska ayaana ku daray goolka seddexaad oo uu caawiye ka ahaa Gini Wijnaldum.
Laakiin Bordeaux ayaa gadaal ka soo kacday iyagoo ku dhawaatay inay barbareeyaan PSG laakiin waxay dhaliyeen kaliya labo gool oo ay u kala saxiixeen Elis iyo Niang.
PSG waxay 10 dhibcood ka sareysaa kooxda kaalinta labaad ee Lens ka dib 13 kulan oo ay ciyaareen horyaalka Faransiiska.
Dhanka horyaalka Bundesliga Bayern Munich ayaa hogaanka sii xajisatay markii ay 2-1 kaga badiyeen kooxda Freiburg. Goretzka ayaa hogaanka u dhiibay ka hor inta uusan shabaqa u soo taaban gool magafe Robert Lewandowski.
FC Hollywood waxay afar dhibcood hogaanka kaga hayaan Borussia Dortmund oo guuldarro 2-1 ay ka soo gaartay kooxda RB Leipzig.
Nkunku ayaa hogaanka u dhiibay Leipzig qeybtii hore iyadoo Dortmund uu u barbareeyay Marco Reus qeybtii labaad ee ciyaarta, balse dhamaadkii ciyaarta Poulsen ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda Leipzig oo guul weyn ka gaartay Dortmund.
Ka dib 11 kulan oo la ciyaaray Bundesliga Bayern Munich ayaa ku hogaamineysa 28 dhibcood, halka Dortmund oo labaad ku jirta ay leedahay 24 dhibcood, Freiburg ayaa seddexaad ku jirta oo leh 22 dhibcood. Wolfsburg oo 1-0 kaga badisay Augsburg ayaa ku jirta kaalinta afaraad iyagoo leh 19 dhibcood
Previous articleReal Madrid 2-1 Rayo Vallecano, Karim Benzema oo ka Caawiyay Los Blancos la Wareegista Hogaanka
Next articleAskar ka tirsan ilaalada Axmed Karaash oo lagu xiray Garoowe + sababta
Photo@Reuters Mohamed Salah ayaa talaabo u qaaday si uu heshiis cusub ugu saxiixo kooxda Liverpool sida lagu sheegay warbixinta ugu danbeesay ee kooxda...
DEG DEG: Farmaajo oo soo saaray go’aano ka kooban shan qodob
Midowga Murashaxiinta oo ku kala qeybsamay Ahlu-Sunna iyo Galmudug – Sidee...
Daawo: Jeneraal Laba-Afle oo shaaciyey natiijada wada-hadal uu la galay Ahlu-Sunna